Isitudiyo esihle esigcwele ilanga - I-Airbnb
Isitudiyo esihle esigcwele ilanga
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguHans
Kwindlu enkulu, esi situdiyo sincinci kwaye sihle sigcwele iifestile ezijonge kumzantsi kunye nomphantsi weplanga kunye neendonga ze-slate, zilungele kakuhle ezimbini.
Igumbi lokulala elinye linika abantu abathandanayo ithuba lokubaleka, abafuna ukuya eMontreal ngemoto.
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle, elinendawo yokutyela, ikhitshi negumbi lokuhlambela elincinci elihle (akukho gumbi lokuhlala) linemigangatho emihle yeplanga, iindonga ze-slate, ibhedi enkulu etofotofo. Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle libalungele abantu abambalwa, likwicala elincinci, malunga ne-430 sq. feet okanye i-40 sq. m. (akukho gumbi lokuhlala); izinto onokuzisebenzisa ziquka ikhitshi elipheleleyo, ukufikelela kwi-intanethi, i-over-the-Air (akukho TV) kunye nendawo yokupaka. Ifumaneka kwidolophu yaseBaie D'Urfe--indawo ekufutshane nentshona yeSiqithi saseMontreal, malunga neekhilomitha eziyi-35 (imizuzu eyi-45-50 ngebhasi) ukusuka kwidolophu.
Le yindawo entle yokutyelela eMontreal. Sifumaneka lula kwiindawo zabakhenkethi zasekuhlaleni eMontreal naseOttawa kwaye yimizuzu eyi-10 kuphela. ukusuka eSainte Anne de Bellevue kunye neKholeji yeMcDill McDonald. Sisekude ngeeyure eziyi-2 ukusuka eOttawa, eMt. I-Tremblant, iziqithi eziyi-1000; kwaye ngaphantsi kwesiqingatha seyure ukusuka e-Oka Park, nakumazantsi edolophu yase-Montreal.
Xa ukufutshane nekhaya, yonwabela indawo yethu entle, iBaie D'Urfe ijongwa njengenye yezona ndawo zintle nezikhuselekileyo eKhanada.
Sihlala kwindawo ethe cwaka nekhuselekileyo elungele intsapho. I-Baie D'Urfe ineendlela zokubaleka nezokuqhuba ibhayisekile, ukuwela kwi-Sainte Anne emangalisayo okanye ukuya kwihlathi elihle kwi-Arboretum.
Inamaxabiso ngoko ukonga kwakho kuya kukuvumela ukuba wonwabele indawo entle yaseMontreal. Ibhasi eya eMontreal ikude kakhulu.
4.83 · Izimvo eziyi-180
Ifumaneka kwidolophu yaseBaie D'Urfe--indawo ekufutshane nentshona yeSiqithi saseMontreal, emalunga neekhilomitha eziyi-35 ukusuka kwidolophu.
Xa ukufutshane nekhaya, yonwabela indawo yethu entle, iBaie D'Urfe ijongwa njengenye yezona ndawo zintle nezikhuselekileyo eKhanada. Sihlala kwindawo ethe cwaka nekhuselekileyo elungele intsapho. I-Baie D'Urfe ineendlela zokubaleka nezokuqhuba ibhayisekile, ukuwela kwi-Sainte Anne emangalisayo okanye ukuya kwihlathi elihle kwi-Arboretum.
I am a marine ecologist, working on nature conservation and sustainable development for more than 25 years, my work is my passion--it takes me to some of the most beautiful places and allows me to meet awesome people from around the globe. I love diving in Southeast Asia, my dream is to live and work in Bali.
I am an AirBnB host as well as guest--welcome to Montreal, Quebec, where "my home is your home"
I am a marine ecologist, working on nature conservation and sustainable development for more than 25 years, my work is my passion--it takes me to some of the most beautiful places…
Kanye eflethini, iindwendwe zingafika nanini na zize zihambe ngokukhululekileyo. Sikholelwa ekunikeni iindwendwe zethu inkululeko nezinto eziyimfihlo ezizifunayo. Ukuba iindwendwe zethu zidinga into eza kwenza ukuhlala kwazo kube tofotofo kuze kube mnandi, sisoloko sifumaneka ngefowuni, nge-txt, nge-imeyile, okanye ngokucofa nje kumnyango wendlu oyintloko.
Kanye eflethini, iindwendwe zingafika nanini na zize zihambe ngokukhululekileyo. Sikholelwa ekunikeni iindwendwe zethu inkululeko nezinto eziyimfihlo ezizifunayo. Ukuba iindwendwe…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Baie-D'Urfe